Fampidirana sy tombony ho an'ny sofa elektrika – Baotian Furniture Co., Ltd.
The electric sand chair has different buttons. Ny bokotra ambony sy ambany eo amin'ny bokotra dia afaka mifehy ny ambony sy ambany ao ambadiky ny sofa. Miaraka amin'ny fanitsiana ny sezika elektrika, hiova koa ny toeran'ny olona eo amin'ilay ondana, toy ny fihemorana. Indraindray, hihetsika mihemotra ny valahany ny olona, ary ny mifamadika amin'izany. Raha maniry ny hanana izany ianao, mifandraisa aminay- ny sofa bed manufacturer.
ny "ody" ny seza seza elektrika dia rehefa mipetraka, tafaverina ny lamosina, and there is no need to add a footstool in the front, ary ny tongotra dia mety mianjera voajanahary na hapetraka amin'ny fandroana tongotra. Raha mila tongotr-tongotra ianao, azonao atao ny mampiasa ny bokotra fanaraha-maso hisondrotra voajanahary. Na dia sarotra kokoa aza ny firafitra noho ny seza nentim-paharazana, azo antoka kokoa ny fampisehoana ary avo ny naoty.
Tombony amin'ny sofa elektrika:
1. Ny sofa elektrika dia misy ny fihenan'ny tsindry. Malemy ny seza sezalà ary kely ny tsindry amin'ny vatan'olombelona, noho izany dia ho ahazoana aina kokoa ny hipetraka eo amin'ny seza sofa;
2. Ny sofa elektrika dia manana asa fanorana. When a person sits on the contemporary corner sofa and does a little activity, hiteraka fantsona kely amin'ny loharano sy fitaovana malefaka io. Ny vatan'olombelona dia iharan'ny herin'ny fiovan'ny toetr'andro, izay afaka mitana ny andraikitry ny fanorana.
3. Ny sofa elektrika dia malefaka. Ny mason'ny sofa dia vita amin'ny fitaovana malefaka toy ny rongony, volontany, spaonjy, sns. Misy loharano maromaro ao ambany, izay sady malefaka no matevina.
Tags: Mividiana seza sofa, sofa elektrika
Fotoana fandefasana: 2020-08-01